ကျွန်တော် ခလုပ်နှိပ်မိသော ဘာသာတရားများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ကျွန်တော် ခလုပ်နှိပ်မိသော ဘာသာတရားများ
ကျွန်တော် ခလုပ်နှိပ်မိသော ဘာသာတရားများ
“မင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာ ငါတို့လူတွေ အဓိက ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရား
အမျိုးအစား ဘယ်နှစ်ခု ရှိသလဲ”
“ဗျာ …. လေးခုလေ …”
“အင်း … နာမည်အရတော့ လေးခုပေါ့ကွာ ဒါပေမယ့် ငါတို့က နာမည်မတပ်ဘဲ ပြောရအောင်”
ကျွန်တော်လည်း ပညာရှိကြီး ပြောမယ့် စကားကို နားစွင့်နေလိုက်ပါတယ်။ ပညာရှိကြီးက ချက်ချင်း ဆက်မပြောဘဲ သူတည်နေတဲ့ ရေနွေးအိုးအောက်က မီးကို ယပ်ခပ်နေပြန်တယ်။
“ပညာရှိကြီး ဆက်ပြောပါဦးဗျ .. နာမည် အရ လေးခု ပြီးတော့ ဘာလဲဗျ”
“မင်းတို့ လူငယ်တွေ ခုခေတ်ပေါ်တဲ့ Play Station ဂိမ်းကို ဆော့ဖူးမှာပေါ့”
အဲ။ ပညာရှိကြီးက အသက်သာ ကြီးတာ ဂိမ်းတွေ ဘာတွေ သိလို့ပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း ဆော့ဖူးတဲ့ အကြောင်း ပြောပြလိုက်တယ်။ ပညာ ရှိကြီးက ဆက်ပြောတယ်။
“အင်း……. မင်းတို့ ဂိမ်းဆော့ရင် ဘောလုံး ဂိမ်းကော ဆော့ဖူးမှာပါ ဒါဆို”
“ဟုတ် … ဆော့ဖူးတာပေါ့ဗျ ဘာဖြစ်လို့တုန်းဗျ”
“အဲဒီ ဘောလုံးဂိမ်းမှာ လူ ၁၁ ယောက်ကို မင်းတစ်ယောက်တည်း ထိန်းပြီး ကန်ရတယ်လေ
ဘောလုံးရှိတဲ့ အရုပ်ကို မင်းက လိုက် ထိန်းပြီး ကစားရုံပဲ
မင်းက မင်း အသင်းထဲက ရှေ့တန်းကို ပေးချင်ပေး၊ နောက်ကို ပြန်ပေးချင်ပေး
ပြီးတော့ ဂိုးရှူးခွင့်ရတဲ့ အရုပ်ဆိုလည်း မင်းက ကန်လိုက်တာပဲ မဟုတ်လားကွ”
“အဲ .. ဟုတ်တယ်လေဗျာ”
ပညာရှိကြီးက ရေနွေးအိုးထဲကို လက်ဖက်ခြောက်တွေ ခပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အဖုံးကို အဝတ်နဲ့ အုပ်ကိုင်ပြီး ပြန်ဖုံးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာဖြင့် ဘာသာတရားအကြောင်းကနေ ဘောလုံးဂိမ်းအကြောင်း ရောက်သွားတဲ့ ပညာရှိကြီး စကားထဲမှာ စဉ်းစား ခန်းဝင်ရပြီပေါ့။ ဘာလဲဗျာ။ ဘာသာတရားအကြောင်းကနေ ဘောလုံးကန်တာဆီရောက်သွားရအောင် အဲဒီ နှစ်ခုက ဆိုင်လို့လားပေါ့။ ပညာရှိကြီးကတော့ တကယ် ပညာရှိမယ့် ပုံပါပဲ။ ဘာပညာရှိလဲတော့ ကျွန်တော်လည်း သေချာမသိဘူးရယ်။ သူ့ကိုတော့ ဒီရွာက လူတွေအကုန်လုံးက ပညာရှိကြီးလို့ ပြောကြတာပဲ။
သူက လက်ဖက်ခြောက် ဆူအောင်အထိ စောင့်ပြီး ရေနွေးကြမ်း နှစ်ပန်းကန်ကို ငဲ့လိုက်တယ်။ ပြီး ကျွန်တော့်ကို တစ်ခွက် လှမ်းပေးတယ်။
အငွေ့တထောင်းထောင်းနဲ့ အနံ့သင်းပြပြ ရေနွေးက ကျွန်တော့်ကို နွေးထွေးသွားစေတယ်။
“ဒီလိုလေ… ဘာသာတရားမှာ ဖန်ဆင်းရှင်ကို ယုံတဲ့ ဘာသာနဲ့
ကံ၊ ကံ၏ အကြောင်းအကျိုးကို ယုံတဲ့ ဘာသာဆိုပြီး အဓိကကွဲပြားချက် နှစ်ခု ရှိတယ်မလား”
“အင်း … ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်ခုလုံးကို သိပ္ပံနည်းကျနဲ့ သက်သေပြနိုင်လို့လား”
“ပြလို့ … ရတာ ရတယ်လေ”
ကျွန်တော်က ငြင်းတော့ ပညာရှိကြီး က ပြုံးတယ်။ ကျွန်တော့်စကားပဲ မှားသွားသလား။ ကျွန်တော်လည်း ဘာသာတရားအကြောင်း သေချာသိတာ မဟုတ်တော့။ သူနဲ့ ဇွတ်လည်း မငြင်းရဲဘူးဗျ။ ဒီတော့ သူ့စကားကိုပဲ ဆက်နားထောင်နေလိုက်တယ်။
“အိုကေ … ဘာသာတရားတိုင်းမှာတော့ အနည်းငယ်အချက်အလက်လောက်
သက်သေပြကောင်း ပြနိုင်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် .. ဘာသာတရား တစ်ခုလုံးကို
ဘယ်လိုမှ မှန်ပါတယ်လို့သိပ္ပံနည်းကျ မပြနိုင်ဘူး
တစ်ချို့ဘာသာရဲ့ ကောင်းကင်ဘုံ၊ တစ်ချို့ဘာသာရဲ့ နတ်ပြည်၊ ငရဲပြည်လောက်ပဲ
“အဲ ဟုတ်သား.. ဒါတွေတော့ သိပ္ပံပညာက ဘယ်ပြနိုင်မလဲဗျ”
ပညာရှိကြီးက ရေနွေးကြမ်း တစ်ငုံ သောက်ပြီး ဆက်ပြောပါတယ်။
“သချာင်္ပညာရပ်မှာ မသိကိန်းတွေ များနေရင်
မသိကိန်းတွေ အားလုံးကို ကိန်းသေတန်ဖိုးတစ်ခုခု ပေးပြီး
“ဟုတ်.. တွက်ဖူးတယ်ဗျ … Let x =0ဆိုပြီးလေ.. နောက်ဆုံး အဖြေရသွားတယ်”
“အေး… ငါလည်း ဘာသာတရားတိုင်းကို အဲလို တွက်ကြည့်ထားတယ်”
ဘာသာတရားတိုင်းကို ကိန်းသေတန်ဖိုး ပေးရမယ်ဆိုပါလား။ ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ ဖြုံသွားတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မစဉ်းမိဖူးဘူး။
“ဘာသာတရားတိုင်းကို ငါက အမှန်တရား အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တယ်”
“ဗျာ.. အကုန်လုံး မှန်တယ်ပေါ့ .. အမှန်လို့ သတ်မှတ်တယ်ပေါ့ ဟုတ်လား”
ကံအကျိုး၊ ကံအကြောင်းကို လည်း မှန်တယ်ပေါ့ အဲလို သတ်မှတ်လိုက်တယ်”
“မင်းကို ဒါနဲ့ မေးပါဦးမယ်.. ဟိုတလောက ဂျပန်မှာ စက်ရုပ်မ ထွင်လိုက်တာ သိလား”
“ဗျာ… သိတယ်လေ … စက်ရုပ်မက ဘာသာစကား အမျိုး ၂ဝ လောက်တတ်တယ်
ဟင်းအမျိုးပေါင်း ၂၀ဝ ကျော် ချက်တတ်တယ်
ကလေးထိန်းတာက အစ အိမ်မှု ကိစ္စတွေပါ လုပ်တတ်တယ်
ဟုတ်တယ်မလား… ကျွန်တော် facebook ထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်”
“အေး.. ဒါတင် ဘယ်ကမလဲ .. စက်ရုပ်မက လိင်မှုကို ပါ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လုပ်တတ်တယ်ကွ”
“ဟုတ်…. အဲဒီ စက်ရုပ်မနဲ့ ခုကိစ္စက ဘယ်လို …….”
ပညာရှိကြီးက လက်ကာပြပြီး မလောနဲ့လို့ ကျွန်တော့်ကို သတိပေးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကုပ်ကုပ်ကလေး ထိုင်နေမိလိုက်တယ်။
“မင်းစဉ်းစားကြည့် စက်ရုပ်အမ ထွင်နိုင်ပြီဆို…
စက်ရုပ်အထီးလည်း ထွင်လို့ ဘာခက်တော့မလဲကွ”
“အေး… တကယ်လို့သာ စက်ရုပ်အစ်မနဲ့ အထီးကို ထွင်ပြီး
သူတို့ကို လိင်ကိစ္စ လုပ်ခိုင်းမယ်
ပြီးရင် သူတို့ကို လူတွေလိုပဲ reproduction system ထည့်ပေးမယ်ကွာ
သူတို့ ကိစ္စ ပြီးတာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရမယ်
ပြီးရင် အလိုလျောက် နောက် စက်ရုပ်တစ်ရုပ် ထွက်မယ်
Relationship အရ သူတို့သားသမီးပေါ့
အေး… မွေးရင်တော့ စက်ရုပ် သားသားလေးလား၊ မီးမီးလေးလားဆိုတာ
ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်က မဲနှိုက်မယ်လေ ပြီးတော့ သူတို့ကို ဒီအတိုင်းမထားဘူး
တစ်ချိန်ချိန်မှာ ငါတို့သုံနေတဲ့ စက်တွေ ပျက်သလို software တွေ သက်တမ်းကုန်သလို
မွေးကတည်းက မဲနိုက်ပြီး random ပေါ့ကွာ သက်တမ်းကို ရွေးပေးလိုက်မယ်”
ပညာရှိကြီးက သူ့စကားကို ခဏနားလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲလို့ ဆက်တွေးနေမိတယ်။
“ပညာရှိကြီး .. ဒါဆို..
အဲဒီ စက်ရုပ် အထီး၊ အမကိုထွင်ပြီး ကျွန်တော် ဂြိုလ်တစ်ခုပေါ် သွားထားလိုက်မယ်ဗျာ…
နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလာတဲ့ အခါ
စက်ရုပ်တွေ …. ဘယ်လောက်များ .. များနေလိုက်မလဲနော်….
ပြီးတော့ … သူတို့ကိုယ် သူတို့ version မြင့်အောင်… software upgrade လုပ်နိုင်အောင်လည်း
ကျွန်တော် ဖန်တီးထားခဲ့ရင် သူတို့ဟာ မျိုးရိုး တော်ရုံနဲ့လည်း မတိမ်ကောနိုင်ဘူးပေါ့”
ကျွန်တော်တွေးမိတာတွေ ပြောကြည့်တော့ ပညာရှိကြီးက တဟားဟားနဲ့ ရယ်ပါတယ်။
ဟေ့ကောင်လေး.. အဲဒါ ငါတို့လူတွေ ဖန်ဆင်းတာနော်….
မင်း ထွင်ခဲ့ရင် …. မင်းဟာ စက်ရုပ်မျိုးရိုးတွေအတွက် … ဖန်ဆင်းရှင်ပဲ
အို….။ ကျွန်တော် ကြက်သီးတွေတောင် ထသွားတယ်။ ဒါဟာ သူပြောတဲ့ သချင်္ာ ပညာအရတော့ မှန်နေတဲ့ ကိစ္စပဲလား။ ပြီးတော့ … ပြီးတော့ ..။ ကျွန်တော့် အတွေး မဆုံးခင် ပညာရှိကြီးက ဆက်ပြောတယ်။
“ကဲ .. ကောင်လေး …
ငါတို့ နောက်ထပ် အီကွေးရှင်းတစ်ခု ထပ်ချရအောင်”
ခုတော့ ကျွန်တော် အသင့်အနေထား ရှိနေပြီ။ ကျွန်တော် ပညာရှိကြီး ပြောသမျှ မှန်သည် ဖြစ်စေ၊ မှားသည် ဖြစ်စေ လိုက်တွေးဖို့ အသင့် ဖြစ်နေပြီ။
“ခုနက ငါပြောတဲ့ ဘောလုံးဂိမ်းကို စဉ်းစားရအောင်
အဲဒါကို EA လို့ ခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီက တီထွင်ထားတယ်ကွ”
“မင်းက ခလုပ်ကို ကိုင်ထားတယ်.. မင်းအသင်းက ကောင်လေး ရောက်တာနဲ့
မင်းပေးချင်တဲ့ ဘက်ကို ပေး၊ မြှောက်ဘောပေးချင်ရင် မြှောက်ဘော ခလုပ်ကို နှိပ်လိုက်
လူပေးရုံဆိုလည်း လူပေးတဲ့ ခလုပ်ကို နှိပ်လိုက် .. ဂိုးရှူးချင်လည်း ဂိုးရှူးတဲ့ ခလုပ်ပေါ့ကွာ…
အေး.. ဒါပေမယ့် မင်းဂိုးရှူးလိုက်လို့ ဂိုးဝင်သွားရင် … အဲဒီ တီဗွီဂိမ်းထဲက အရုပ်က ဘာဖြစ်လဲ”
“ဗျာ….. ဂိုးရှူးသွားရင်လား.. ပြေးတယ်လေဗျာ….
ဂိုး…ဆိုပြီး .. ကျန်တဲ့ အသင်းသားတွေနဲ့ အပြင်ကလိုပဲ ဖက်ပြီး ပျော်ကြတယ်လေ”
ပညာရှိကြီးက အသံနည်းနည်း ကျယ်လာတယ်။
“တကယ် ဂိုး ရှူးလိုက်တာက ခလုပ်ကို နှိပ်လိုက်တဲ့ မင်းလေ
ဒါပေမယ့် အဲဒီထဲက အရုပ်က သူရှူးတယ်ဆိုပြီး ပျော်နေတယ်မလား”
“ဟာ …… ဟုတ်သား….. ဟုတ်တယ်ဗျ …”
“တကယ်တော့ကွာ… ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒီတွေ အမှန်တရားလို့ လက်ခံထားတဲ့အတွက်
ငါတို့ကိုများ တစ်စုံတစ်ယောက်က အဲလို ခလုပ်နှိပ်ပြီး တစ်ဦးချင်း ခိုင်းစေနေမယ်ဆိုရင်
“ဟာဗျာ… မဟုတ်လောက်ပါဘူး အဲလိုတော့” ကျွန်တော့် ငြင်းဆိုမှု ပြီးတော့ ပညာရှိကြီးက ချက်ချင်း ဟားတိုက်ပြီး ပြန်ပြောတယ်။
“ဟား ဟား… ဟား…… ခု မဟုတ်လောက်ပါဘူးလို့ ပြောအောင်လည်း ခလုပ်နှိပ်လိုက်တာ ဖြစ်မယ်”
“မဟင်နဲ့ ဟေ့ကောင် … မင်း အလုပ်တွေ လုပ်အောင်… မင်း ဝမ်းသာတာတွေ တွေ့ရင်
ရယ်မောအောင် .. ကဲ .. ခု မင်းငိုကွာဆိုပြီး ခလုပ်နှိပ်လိုက်ရင် မင်း ငိုမယ် .. ရယ်ဆို ရယ်မယ်
မင်းတို့ ငါတို့မှာတော့ ဒါကို .. ငါပျော်တယ်.. ငါဝမ်းနည်းတယ်… ဒါ ငါလုပ်တာကွဆိုပြီး မာန်တက်ရတာနဲ့
ကျွန်တော် ငူငူကြီး ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ဖန်ဆင်းရှင်က အဲလိုကြီးတကယ် လုပ်နေတာလားလို့ တွေးရင်း တွေးရင်း။ လူဖြစ်ရတာ ငိုချင်သလို ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ပညာရှိကြီးက ထပ်ပြောတယ်။
“အေး.. ဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်တဲ့ ဘုရားရှိတယ်ကွ ..
သူကတော့ကွာ… သူလည်း မင်းတို့ ငါတို့လိုပါပဲ တီဗွီဂိမ်းထဲက အရုပ်တစ်ရုပ်ပေါ့
ဒါပေမယ့် … သူဟာ အဲလို သူများ ခလုပ်နှိပ်သမျှ လိုက်ကစားနေရတဲ့ ဘဝကို
စိတ်ကုန်သွားတယ်.. ဒီတော့ … သူဟာ အဲဒီဘဝက ရုန်းထွက်ဖို့ ကျန်တဲ့ အရုပ်တွေကို တိုက်တွန်းတယ်
ဒါပေမယ့် လူဆိုမှတော့ကွာ… မိရိုးဖလာ ယုံကြည်မှုတွေရော … ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းတွေရောက
မင်းဟာ အခု ဘောလုံးကို ကန်ပြီး ဂိုးသွင်းလိုက်
ဒါဟာ ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လို့ ယုံကြည်တဲ့သူရှိသလို
ဒီလို ဘဝက ရုန်းထွက်မယ် … ခလုပ်တော့ အနှိပ်မခံနိုင်ဘူးလို့ ထွက်ပေါက် လွတ်လမ်း ရှာတဲ့
ဘောလုံးသမားလည်း ရှိမယ် .. ဒါပေမယ့် မင်းသိထားရမှာက
ငါတို့အားလုံးဟာ အရုပ်တွေပဲလေ… ဘာကို မာန်တက်နေလဲ …
တကယ်လို့ မင်းဟာ ဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်တဲ့ ဘာသာတရား ယုံကြည်တယ်ဆိုလည်း…
မင်းကို ဖန်ဆင်းရှင်က ယုံကြည်လိုက်လို့ ခလုပ်နှိပ်ထားမှာပေါ့ … သူ့ကိုလည်း မင်းကျေးဇူးတင်လိုက်
ပြီးတော့ ဖန်ဆင်းရှင်ကို ယုံကြည်တယ်သူတွေကလည်း
သူတို့ ဖန်ဆင်းရှင်အတွက် သူတို့ ဂိုးတွေ ရှူးနေလိမ့်မယ် …
အနည်းဆုံးတော့ သူတို့ အရုပ်လောကကြီး တိုးတက်လာတာ သူတို့တွေ ပိုလုပ်ခဲ့လို့ပဲ
ကျန်တာကတော့ မင်းဆက်တွေးတော့ လူကလေး”
ကျွန်တော် ပညာရှိကြီး ရှိတဲ့ ရွာကလေးမှ မြို့က အိမ်ကလေးဆီကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြို့ပေါ်မှာတော့ လူတွေက ဘာသာတရားကို ဆွဲကိုင်လို့ ရန်ပွဲတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ အော်… အရုပ်တွေ ပါပဲ အားလုံးကတော့။
ရင် နင့် အောင် says:
စကားဦး ကျန်ခဲ့လို့ပါ။ ဒီက နေပြန် တင်ပေးပါတယ်ဗျ။
စကားဦး။ ။ ယခု ဝတ္ထုသည် ကျွန်တော် တွေးမိသမျှ ချပြမိသော အတွေးသာ ဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့အနေနှင့် မိမိနှစ်သက်ရာ ဘာသာတရားကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဘာသာတရား အစွဲတစ်ခုဖြင့် အတ္တနှင့်ယှဉ်သော ယုံကြည်ချက်တစ်ခုခုဖြင့် လာရောက် ဖတ်ခြင်း၊ သည်းခံကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ ဘာသာတရားအားလုံးကို လေးစားစွာဖြင့်။
– ရင်နင့်အောင် –
ဖတ်ပြီး Keanu Reeves ရဲ့ The Matrix ကို သွားသတိရ မိတယ်။
ကွန်ပျူတာကနေ Control လုပ်ထားခံရတဲ့ လူတွေအကြောင်း။
တကယ်တော့ လောကကြီးထဲ မှာ ဘယ်လူမျိုး၊ဘာသာ မဆို Control လုပ်ခံ နေရတာကတော့ ငါစွဲ၊ အတ္တ မာန မောဟ တွေ ဦးစီးတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ တွေဘဲ။
အဲဒါတွေ အောက်မှာ လူတွေအချင်းချင်း အမုန်းပွါးနေကြရတာ။
ကျုပ်ကတော့.. ခေးအော့သီအိုရီရဲ့.. ဘာတာဖလိုင်းအဖက်အတိုင်းပြောမယ်..
ဘုရားသခင်အလိုတော်ဆိုတာနဲ့.. မိခင်သဘာဝလောက ဆိုတဲ့နာမယ်တပ်/ပေးတာပဲကွာတယ်…လို့..
ဗုဒ္ဓဘာသာလည်း ဆုတောင်းတာနဲ့..ဆုပေးတာနဲ့..ဆုယူတာနဲ့.. ကိုးကွယ်တာနဲ့.. ခိုးချရင်းခိုးချရင်း.. ထာဝရဘုရားသခင်ကိုးကွယ်တဲ့..ဘာသာကြီး၃ခုနဲ့..တော်တော်တူနေပါပြီ…
ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရဖူးတဲ့ …
ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ ရဲ့ ကဗျာလေးကို သတိရမိတယ် …
ဘာသာတွေအကြောင်းပြောရတာ စဉ်းစားရတာ ခွကျလှတယ်………
ကျုပ်ကတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိုးကွယ်လိုက်နာဖို့…..
ဂဗာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘာသာတွေတိုင်း အယူအဆတွေတိုင်းထဲမှ
မိမိသင့်လျော်မည် ထင်ရာလေးတွေကို ကောက်နှုတ်ပြီး ကိုးကွယ်ရကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားတယ်……
ကျစ်လျစ်ပြီး သေသပ်လှပသော..ဝတ္ထုတိုကလေး ။
စာပေ ဖန်တီးမှု တစ်ခု …ဖြစ်တည်လာဖို ့..
စာပေ ဖန်တီးမှု တစ်ခုကို ဖတ်ရှု ခံစားဖို ့
မလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေတွေကြားကနေ
အခုလို လှပ သေသပ်တဲ့ဝတ္ထုတိုကလေး တစ်ပုဒ် ဖတ်ခွင့်ရလိုက်တော့…
ပန်ဒိုရာ ဘောက်စ် ရဲ ့လက်ဆောင်တွေလိုပေါ့
ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ ဗျ။
ခင်ဗျားကို ကွန်ထရိုးလုပ်တာနေမှာပေါ့ …
ခီညားပဲ ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ ကံအကြောင်းကို ပြောပြီးတော့
ကဲ အိုက်ဒီမယ် ဖန်ဆင်းရှင်က ခိုင်းနေပီ
သမာဓိ နဲ့ ပညာ၊ သမထ နဲ့ ဝိပဿနာ မကွဲပြားရင် ဟိုဟာလဲ ဟုတ်နိုးနိုး ဒီဟာလဲ ဟုတ်နိုးနိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ ငြိမ်းအေးမှုထက် လွတ်မြောက်မှု ရှုဒေါင့်ကနေ မြင်တတ်ရင် သခင်နဲ့ကျွန်၊ အမှန်နဲ့အမှား သိနိုင်ကောင်းပါရဲ့… ညဏ်ဖြစ်ဖို့ ကံကောင်းရတယ်… ကံကောင်းပါစေဗျာ….
ဖန် ဆင်း ရှင် နဲ့ လာ တိုး ရ တယ် လို့ :-)
အရေးအသားရယ်၊အတွေးအခေါ်ရယ်၊ နောက် knowledge ကိုလေးစားတယ်